Kabala Barruu Dhangeessuu
Maqaa bocquu tarreerraa filuu ykn maqaa bocquu sududaan galchu sii hayyama.
Bocquuwwan hedduu buufatoota xinnaadhan qoodaman galchuu ni dandeesa.LibreOfficemaqoota bocquu tarreen dhufan fayyadama yoo bocquuwwan durtii argamuu baate
Hammamtaa Bocquu Font Size
Hammamtaa bocquu gara garaa tarree irraa akka filattu ni heyyama ykn hammamtaa hujeekaa galchuuf.
Barruu filatame yabbuu taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri yabbuu ta'a. Yoo filannoon ykn jechi yabbuu ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.
Barruu filatame mirgada taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri mirgada ta'a. Yoo filannoon ykn jechi mirgada ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.
Addaan fageenya dabalaa
Addaan Fageenya Hir'isi
Keewwata ammee irratti addaan fageenya sarara baaqqee fayyadama. kun durtii qaindaa'inaati.
Iddina sararaa: 1
Addaan fageenya keewwata ammee sararoota tokkoof walakkaatti qindeessa.
Iddina sararaa: 1.5
Addaan fageenya keewwata ammee gara sararoota lamatti qindeessa.
Iddina sararaa: 2
Tuqaalee rasaasaa gara keewwata filameetti ramadi ykn keewwatoota rasaasamerraa haqi.
Sadarkaa tokko olkaasaolkaasi
Sadarkaa tokko gadbuusaGadbuusa
Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.
Gargaarsa Afaan Eeshiyaa
Barruun bitaa irraa gara mirgaa ce'a
Kallattii barruu bitaa irraa gara mirgaa
Barruun gubbaa irraa gara jalaa ce'a
Kallatti barruu gubbaa irraa gara jalaa
Hammamtaa bocquu barruu filamee dabala.
Hammamtaa bocquu barruu filatamee hir'isa.
Title is: Kabala Barruu Dhangeessuu